အရည်အသွေးမြင့်မား Chilling condiments ဆာဗာများနှင့်ရေခဲနေသော condiments ဆာဗာပေးသွင်း
ရေခဲပြင်တွင်5ဖြုတ် Chilling condiments ဆာဗာအတွက် 1: ရေခဲနေသော5ဖြုတ်ဟင်း, condiments စောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသောလမ်း, အသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နာရီ Delicious လတ်ဆတ်အေးမြသော appetizers နှင့်အတူ Tray ထဲကကွန်တိန်နာအမှုဆောင်ခြင်း။
သငျသညျပွညျ့အဝရန်သင့်ညစာပျော်မွေ့သကဲ့သို့ရှည်လျားနာရီအားလုံးသင့်ရဲ့အရသာ appetizers, dressings သည်နှင့်, လတ်ဆတ်သောအအေးနှင့်အရသာဝက်အူချောင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းရှာလိုပါသလားဟုတ်ပါတယ်, ရေခဲပြင်တွင်ဒီ Chilling condiments ဆာဗာသင်တို့အဘို့အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ။ သင့်ရဲ့ဝက်အူချောင်း, dips, ကော့တေးအပါအ, ကုန်တယ်အသီးအနှံ, dressings သည်, appetizers, သံလွင်သီး, ပုစွန်နှင့်သင်ဆတ်အေးမြနဲ့အရသာရှိတဲ့, လတ်ဆတ်သောစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိဘာမှကိုထိန်းသိမ်းဝတ်ပြုရန်ဤရေခဲနေသော Chilling condiments ဆာဗာများကိုအသုံးပြုပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေမရေမတွက်နိုင်သောများမှာ!
ဤသည်အံ့သြဖွယ်မျြးစိမျ့စိမျ့ condiments caddy, သင်နှင့်သင့်ဧည့်သည်များပြန် တင်. နေသမျှကာလပတ်လုံးပါတီသင်တစ်ဦးမိုးလုံလေလုံဒါမှမဟုတ်ပြင်ပပါတီစည်းရုံးရေးနေကြသည်ဖြစ်စေ, အပေါ်သွားအဖြစ်အဘို့ပါးစပ်-ရေလောင်းအစားအစာနှင့်လန်းဆန်း dips နှင့်ဝက်အူချောင်းခံစားရန်ခွင့်ပြု, အေးကိုသင်၏အစာကိုစောငျ့ပါမညျ တစ်ဦးမိတ်ဆွေများက 'သို့မဟုတ်မိသားစုစုဝေးတစ်ပျော်ပွဲစားသို့မဟုတ်တစ်ကင်, ဒီထိပ်တန်းထစ်ဘူဖေးသို့မဟုတ်စားပွဲ server ကိုသင်လတ်ဆတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်အတိအကျကဘာလဲ!
မူလစာမျက်နှာသိုလှောင် Chilling condiments ဆာဗာ
(မရရှိနိုင်သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်အရောင်ကိုလက်မခံ) Clear ကို Transparent
အရောင် box ကို Size:
41 * 16.5 * 12cm
မာစတာစက္ဏူထူနှုန်း6PCs, စက္ဏူထူအရွယ်အစား 43 * 28 * 52.5cm ။
အဆိုပါ Chilling condiments ဆာဗာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ:
2.Five ကျယ်ဝန်း, ဖြုတ် compartment
3.A လက်တွေ့ရေခဲပြင် Holder
4.Two Comfortable ဘေးထွက်ကိုင်တွယ်
5 ဖြုတ် compartment:
အောက်ခြေဗန်း, သင့် appetizers စောင့်မမည်သောရေခဲကိုင်ထားသစ်သီးများနှင့်အေးမြနဲ့အရသာရှိတဲ့ dips လိမ့်မယ်နေစဉ်5ဖြုတ်အခန်း, နှစ်ခွက်မှတက်ကိုင်နိုငျပါသညျ!
အဆိုပါအခန်းသင်ပြုရန်ရှိသည်ကောင်းတစ်ဦး amount.All ကိုင်ဆောင်ထားသူအတွက်အအေးရေခဲထားပါနှင့်အခန်းထဲသို့ဝက်အူချောင်း, dips, ကုန်တယ်အသီးအပွသို့မဟုတ် appetizers နှင့်ပိုပြီးနေရာဖြစ်ပါသည်ကိုင်ထား!
အဆိုပါ2ခြမ်းလက်ကိုင်ပုအထူးဒီဇိုင်းရော်ဘာခွကေိုခြစ်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကနေမဆိုမျက်နှာပြင်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်နေချိန်မှာသင်မစိုက်, အမျြးစိမျ့စိမျ့ condiments caddy ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပေါင်းဘက်တွင်နွေရာသီကာလအတွင်းအိမ်ပြင်ကို အသုံးပြု. လျှင်ပျံအင်းဆက်ပိုးမွှားထွက်စောင့်ရှောက်မည်သည့်အဖုံးဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျပါတီများ, ကင်စုဝေး, ဘူဖေး, ပျော်ပွဲစားများနှင့်မဆိုအထူးဖြစ်ရပ်မှာဒီမျြးစိမျ့စိမျ့ condiments server ကိုသုံးနိုငျ!
လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နှလုံးခုန်က The Chilling condiments ဆာဗာ T က Add ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခုတော့ဏလှည်း!
သင်ဤ Chilling condiments ဆာဗာအကြောင်းပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ
1.What သင်တို့အဘို့ဤအ Chilling condiments ဆာဗာအသုံးပွုနိုငျသနညျး
အဆိုပါ Chilling condiments ဆာဗာနှင့်အတူအအေး condiments နှင့် toppers ထားပါ။ ရိုးရှင်းစွာအက, အစေခံဗန်းမှရေခဲတစ်အလွှာ add ငါးဖြုတ် Tray ထဲမှာနေရာချခြင်းနှင့်သားညှပ်ပေါင်မု condiments, သုပ် dressings သည်, သောက်စရာ toppers နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူဖြည့်ပါ! မည်သည့်ပြင်ပပျော်ပွဲစား, ကင်အဖြစ်အပျက်, ပါတီနှင့်ပိုပြီးဖို့စိတ်ကူး! ပိုမိုလွယ်ကူစာစားပြင်ပတွင် Make နှင့်ဘယ်တော့မှစားရဲ့မတိုင်မီအစားအစာလုယူခွင့်ပြုပါ!
ပထမဦးစွာပြုလုပ်ပြီးတော့ before.And လျှော်သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကိုင်ဆောင်ထားသူအတွက်နေရာအရပ်အအေးရေခဲနှင့်ပေါ်တွင်အခန်းနေရာ! သင်သည်သင်၏ဝက်အူချောင်းဝတ်, dips, ကော့တေးအပါအ, ကုန်တယ်အသီးအနှံ, dressings သည်, appetizers, သံလွင်သီး, ပုစွန်များနှင့်ဘာမှလုပ်နိုင်သငျသညျအေးသောအပူချိန်တွင်စားနပ်ရိက္ခာ fresh.Preserving စောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိမတိုင်မီပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! အသုံးပြုပြီးနောက်ကိုလျှော်ပေးပါ။
ဗန်း်ထမ်းဆောင်ဤသည်အံ့သြဖွယ်အအေး condiments ဆိုအခါသမယများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုပါ! သင်တစ်ဦးမိတ်ဆွေများက 'သို့မဟုတ်မိသားစုစုဝေးတစ်ပျော်ပွဲစားသို့မဟုတ်တစ်ကင်တစ်ခုမိုးလုံလေလုံဒါမှမဟုတ်ပြင်ပပါတီစည်းရုံးရေးနေကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီထိပ်တန်းထစ်ဘူဖေးသို့မဟုတ်စားပွဲ server ကိုသငျသညျလတ်ဆတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်အတိအကျကဘာလဲ!
သတိ:သတိထား 1.Be သင်ကိုင်ဆောင်သူအတွက်အအေးရေခဲထားပါအခါ။
2.Do4နာရီထက်ပိုရှည်များအတွက် condiments server ကိုအတွက်အက်ဆစ်အသီးအပွမချန်မထား။
သုံးပြီးပြီးနောက်ကို item clean 3.Please ။
ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်လိုပဲ။ ဒါကြောင့်အဘို့အသုံးပြုမှု may ။ အသီးသို့မဟုတ် condiments များအတွက်အသုံးပြုရန်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း MICS ပစ္စည်းများကိုအဘို့သင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိုလှောင်မှုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးကြောဖို့လွယ်ကူပြီးစတိုးဆိုင်။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
ကောင်းပြီဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျယ်ဝန်သောအခန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့လုံးပြင်ပတွင်မိသားစုပျော်ပွဲစားမှာဟော့ဒေါ့ဘားများအတွက် condiments များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသော, ကျနော်တို့နှစ်များအတွက်အသုံးပြုအမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်သိုလှောင်ဘို့ဤသုံးပါ။ သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်နေရာလေးကိုဖြစ်ကြသည်ဒါရုံရေခဲသေတ္တာထဲမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ, ကွန်တိန်နာအလွယ်တကူထိုင်နှင့်ဖုံး / အဖုံးအမှန်တကယ်ကြံ့ခိုင်နှင့်ခိုင်ခံ့သောထုံးစံ၌ပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အသီးအသီးအဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောမဟုတ်ဘဲကျယ်ဝန်းအခန်းရှိခြင်း၏အဆင်ပြေစေရန်ကိုချစ်။
ဂရိတ် Chilling condiments ဆာဗာ!
ဤသည် condiments server ကိုကောင်းစွာအလွယ်တကူ crack ဖို့မထင်ထားဘူးတဲ့ပျော့ပြောင်းပြီးပလပ်စတစ်အတူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနေဆဲခက်ခဲပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကျွန်မမျှော်လင့်ခဲ့သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးကိုပါ! ဗန်းသင်တို့တွင်အထင်နိုင်ပါတယ် topping ချဉ်လှံ, ခရမ်းချဉ်သီးချပ်သို့မဟုတ်အခြားအဘို့အလုံလောက်အောင်ကြီးမားဖြစ်ကြသည်။ အရမ်း Ice Cream toppings အကောင်းဆုံးပါပဲ! ဒါကြောင့်အသုံးပြုစဉ်လျှောမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီအကွန်တိန်နာအောက်ခြေအပေါ် grippers ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားရုံတကယ့်ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်!
ဒီပါတီများအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အရမ်းမိုက်တယ်။ အဆိုပါ condiments ရေခဲသာ 1 ပြန်. ဖြည့်အတူတစျခုလုံးကိုပါတီ chilled နေ၏။ ကြောင်းကြီးဒါကြောင့်ပါတီ6ကျော်နာရီကြာခဲ့သည်။ တစ်နေရာလေးကိုကွန်တိန်နာအဖြစ်ဒီအပေါ်ချီးမွမ်းလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့အခြားဝယ်ယူခဲ့သည်။ အချိန်တွင်ကောင်းမွန်တဲ့စျေးနှုန်း။
ရေခဲပြင်တွင်4ဖြုတ် Chilling condiments ဆာဗာအတွက် 1
ရေခဲပြင်တွင်4ဖြုတ် Chilling condiments ဆာဗာအတွက် 1: အကြီးစား Clear ကို condiments ဆာဗာစည်းရုံးရေးမှူး4ကွန်တိန်နာနှင့်အတူရေခဲပြင်ပေါ် ......
ရေခဲပြင် Tray ထဲမှာအတူ Chilling Appetizer ဆာဗာ
ရေခဲပြင် Tray ထဲမှာအတူ Chilling Appetizer ဆာဗာ: ရေခဲနေသောအပေါ် chilled အစားအစာကိုစောင့်ရှောက်ရန်6ကဏ္ဍများနှင့်အတူ Tray ထဲကကွန်တိန်နာအမှုဆောင် ......
ရေခဲပြင်အမှုဆောင် Tray ထဲမှာတွင်3ပိုငျးပိုငျး acrylic
ရေခဲပြင်တွင်3ပိုငျးပိုငျး acrylic ခုံးအဖုံးနှင့်အတူဗန်းအမှုဆောင် Tray ထဲက-acrylic Iced အမှုဆောင်ခြင်း, ရေခဲပြင်တွင် Appetizer ပွေီးစောင့်ရှောက် ......
စောင့်ရှောက်ဖို့ hours.easy လမ်းအတွက်သင့် Dips လတ်ဆတ်တဲ့ပန်းကန်-Keep အမှုဆောင်ရေခဲပေါ်နှစ်ချက် Dips ......
acrylic ရေခဲပြင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Bowl နှင့်အတူသံမဏိ Dip Chilling Bowl
acrylic ရေခဲပြင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Bowl ♦ Dip ပန်းကန်နှင့်အတူသံမဏိ Dip Chilling Bowl ရေခဲအစုအပျေါ dips, ပုစွန်, စောင့်ရှောက် ......